ओलीपछि राष्ट्रपति भेट्न एकाएक शीतल निवास किन पुगे फेरी प्रचण्ड ? — Imandarmedia.com
ओलीपछि राष्ट्रपति भेट्न एकाएक शीतल निवास किन पुगे फेरी प्रचण्ड ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता भए लगत्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता भए लगत्तै उनी शीतल निवास पुगेका हुन् । स्रोतका अनुसार ओलीसँग भएको भेटमा प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा नआउने तर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर के गर्न खोजेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश फेरि ल्याउन खोजेको नेताहरुको आशंका छ ।
जवाफमा ओलीले ‘दुई तीन दिन त केही हुन्न’ भनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । यसले अध्यादेश ल्याउने तयारीको आशंकालाई बल पुर्‍याएपछि प्रचण्ड शीतल निवास गएका हुन् । ‘तपाई पार्टीको एउटा पक्षमा लाग्नु हुँदैन है’ भन्ने आग्रह गर्न प्रचण्ड शीतल निवास गएको स्रोतले बताएको छ ।
यस्तै राजीनामाको दवाव बढेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठक छल्न थालेको भन्दै नेताहरुले आक्रोश पोखेका छन् । बिहीबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमालटारमा बसेको बैठकले ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि आफ्नो राजीनामा टार्ने प्रयासस्वरुप पार्टी बैठक छाडेको नेताहरुको आक्रोश छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यस्तै सचिवालय बैठक समेत सोही बीचमा बसेपनि ओलीले बस्ने अनिच्छा नजाएको स्थायी समिति सदस्य एनके प्रयाईँले जानकारी दिए । आजको बैठकमा ओलीलाई राखेर गम्भीर सवाल जवाफको प्रयास भएपनि ओलीले एकपछि अर्को बैठक छल्ने प्रयास गरेको नेताहरुको भनाइ छ ।
बरु ओलीले पार्टी बैठक छल्दै संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । ओलीले स्थायी समिति बैठककै बीचमा एकाएक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउँदा आधा मन्त्री स्थायी समिति र अधाजसो मन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
संसदको बिजनेस रहेकै अवस्थामा ओलीले एकाएक अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेका हुन् । जुन निर्णय अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस भएकोमा स्वीकृत भइसकेको छ ।
सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समेत कुनै छलफल नगरेको बताइएको छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कां‌ग्रेसले पनि आफूहरुसँग परामर्श नभएको जनाएको छ ।
संसद सचिवालयले पनि चालु अधिवेशन कम्तीमा असार महिनासम्म लम्बिने बताउँदै आएको थियो । नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी रहेको सन्दर्भमा ओलीले हतारमा निर्णय लिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
मंगलबारको स्थायी कमिटि बैठकमा के भयो ?
गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको हामीलाई स्वीकार्य छैन : कृष्णचन्द्र नेपाली
एमाले नेता भीम रावलले ट्वीट गर्दै दिय यस्तो कडा पर्तिक्रिया
एकाएक राजीनामा दियका गुरुङ बने फेरी मुख्यमन्त्री, आजै शपथ
जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाउँदै गरे यस्तो घोषणा
माधव समूहका यी २० नेताले चाले यस्तो कदम,
किन गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य थापालाई स्पष्टीकरण सोधियो
नयाँ सरकार गठनका लागि बाबुरामले राखे यस्तो प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओलीले किन गुहारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ? यस्तो छ कारण
प्रधानमन्त्री पदमुक्त भयको २४ घण्टा नबित्दै कांग्रेसले गर्यो यति महत्वपुर्ण निर्णय